प्रकाशित: पुष २२, २०७८ / 1,378 पटक पढिएको
धरान: अहिले समयमा ईश्वररुपी मानिस वा महामानव हुँ भन्दा पत्यार लाग्छ !? देवलोकबाट देवता र देवीहरु पृथ्वीमा आएर तपाईलाई दर्शन दिएको पत्याउनु हुन्छ !?
तपाईलाई पत्यार नलागेर के गर्नु ? सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका ६ जब्दी जलपाई चोकमा हाल बस्दै आएका टिकाप्रसाद विश्वकर्माले आफुलाई दैवीशक्तियुक्त महामानव र इश्वरकोरुप भएको बताउदै आएका छन् । उनलाई विश्वास गर्ने भक्तजनहरुलाई सप्तकोशी नदीमा राती लगेर देवलोकबाट देवी देवता प्रकट गराएर दर्शन गराउने गरेका छन् । यसरी ठगिनेमा धरान जस्तो आधुनिक, शिक्षित सहरका थुप्रै मानिसहरु रहेछन् ।
पहिला विश्वास गरेर सुनचादी, पैसा मागे जति दिएका धरानका ती पुर्वभक्तहरुको महामानव भनिएका विश्वकर्मासँग त्यतिबेला मोह भंग भयो, जब उनले देवलोकबाट आएको भनिएका व्यक्तिहरु बाटोमा भेटिन थाले । देवलोकमा पैसा, सुन आवश्यक पर्यो भन्दै भक्तजनहरुसँग संकलन गरेर हिडेका महामानव विश्वकर्मा ३ महिना पुख्यौली घर भोजपुर गएको पनि पत्ता लगाए । त्यसपछि आफुहरु ठगिएको भन्ने महसुस गरेर ती भक्तजनहरु उनको विरोधमा उत्रन थाले । उनीहरु प्रहरीमा पुगे, सिडिओ कार्यालय पुगे, तर ठगी र ठगहरुविरुद्ध कारबाही गर्न मानेनन् । त्यसपछि बाध्य भएर पीडितहरुले बिहिबार धरानमा पत्रकार सम्मेलन गरेर महामानव भनिएका विश्वकर्मा र उनको टोलीको ठगीबारे सार्वजनिक गरे ।
पीडित मध्येका एक धरान ८ का सीताराम मल्लले बहिनीको उपचार गर्न जादा आफु पनि भ्रमित भएको र विश्वासमा परेर धेरै धनसम्पत्ति गुमाएको बताए । उनका अनुसार पछिल्लो ९ महिना यता शंका लागेर सुक्ष्मढंगले खोजबिन गर्दा कोशी नदीमा प्रकट हुने देवी देवताहरु देवलोकबाट आएका वास्तविक देवी देवता नभै महामानव भनिएका विश्वकर्माकै भाईभतिजा, आफन्तहरु भएको पत्ता लागेको थियो । त्यसपछि आफु र अन्य भक्तजनहरुले विरोध गर्न थालेपछि मार्ने धम्कीसमेत आएको उनले बताए । 'धेरैलाई ठगी गरिरहेको छ । धरान, काठमाण्डौं, र विदेशीहरुलाई पनि यसरी नै ठगेको छ,'मल्ले भने,'देवी देवता दिउँसो देखाउदैन, राती मात्र कोशीमा लगेर देखाउछ ।'
श्रीमति विरामी भएपछि केन्द्रमा पुगेका पटेल सिंहले पनि आफु ठगिएको भन्ने अहिले मात्र महसुस भएको बताए । यस्तै, शान्ति लामिछानेले आफुलाई पनि राती कोशीमा लगेर मसानहरु देखाएको बताइन् । पछि श्रीमानको मृत्यु हुने बेला भएको भन्दै आयु थप गर्न सुनचादी र पैसा मागेको बताइन् । 'सुनचादी र पैसा बुझाएपछि श्रीमानको आयु जोडिएर ७८ बर्ष पुगेको भनेको छ,'उनले भनिन्,'मैले पहिला विश्वासमा परेर आमाको गरगहना पनि बेचेर १ कट्ठा जमिन पनि किनदिएको छुँ ।'
केन्द्रका सचिव भन्छन्, 'उहाँलाई इश्वरकोरुप मानेका छौ'
महामानव बताउने विश्वकर्मासँग फोन सम्पर्क गर्न प्रयास गर्दा उनले रिसिभ गरेनन् । केन्द्रका सचिव भुपेन्द्र खतिवडाले भने विश्वकर्मालाई आफुहरुले ईश्वरको रुप मानेको प्रतिक्रिया दिए । विश्वकर्मामा दैवि शक्ति भएको र ईश्वरले गर्नसक्ने सबै काम गर्ने पनि उनले दाबी गरे । 'ईश्वरले गर्ने सबै काम गर्नुहुन्छ, ईश्वरमा हुनुपर्ने गुण सबै उहाँमा छ,'मोवाइल सम्पर्कमा उनले भने ।
सर्वसाधारणहरुलाई ठगी गरेको आरोपमा भने उनले अस्वीकार गरे । ठगी गरेको आरोप लगाउनेहरुलाई पहिला ठगी नलाग्ने तर चित्त नबुझे पछि मात्र ठगी लाग्न थालेको भन्दै उनले झुटो आरोप भएको बताए । उनले भने, 'उहाँ घरपरिवार त्यागेर यहाँ आएर बस्नु भएको हो । जसले ठगी गर्यो भन्दैछन्, उनीहरु नै ठग हुन् ।'